Iindaba - Ingxowa yeplastiki yenza ntoni
Ngoku ukutya kuya kuba nakhoiingxowa zokupakisha, namhlanje masiqonde umphumo weengxowa zokupakisha ukutya
1. Ulondolozo lomzimba.Ukutya okugcinwe kwingxowa yokupakisha kufuneka kuthintele ukuxova, ukubetha, ukuva, ukuhluka kweqondo lokushisa kunye nezinye izinto.
2. Gcina iqokobhe.Igobolondo inokwahlula ukutya kwi-oksijeni, umphunga wamanzi, amabala, njl., kunye ne-anti-leakage nayo yinto efunekayo yokucwangcisa ukupakisha.Ezinye iipakethi ziqukethe i-desiccant okanye i-deoxidizer ukwandisa ubomi beshelufu.Ukufunxa okanye ukufunxa umoya engxoweni kukwayeyona ndlela iphambili yokupakisha ukutya.Ukugcina ukutya kucocekile, kutsha kwaye kugcwele ngexesha leshelufu ngumsebenzi ophambili wengxowa yokupakisha.
3. Hlanganisa okanye ubeke kwiphakheji efanayo.Ukupakisha izinto ezincinci zohlobo olufanayo kwiphakheji enye yindlela enhle yokugcina umthamo.Izinto zePowder kunye ne-granular kufuneka zifakwe kwi-encapsulated.
4. Dlulisa umyalezo.Ukupakishwa kunye nokuleyibhile kuxelela abantu indlela ipakethe okanye ukutya okufuneka kusetyenziswe, kuthuthwe, kukhunjulwe okanye kuphathwe ngayo.
5. Ukuthengisa.Iilebhile zebhokisi zihlala zisetyenziselwa ukuthengisa ukukhuthaza abathengi ukuba bathenge iimveliso.Ukucwangciswa kokupakisha kube yinto engabalulekanga kwaye itshintshile kumashumi eminyaka.Unxibelelwano lwentengiso kunye nokucwangciswa kwemizobo kufakwe kwipakethe kwaye (ngenxa yezizathu ezininzi) iintengiso zibonisa amagqabantshintshi.
6. Ukhuseleko.Ukupakishwa kunokudlala indima ebalulekileyo ekunciphiseni imingcipheko yokhuseleko kwezothutho.Ukupakishwa kwakhona kuthintela ukutya ekungeneni kwezinye iimveliso.Ukupakishwa kokutya kukwanciphisa amathuba okuba ukutya kubiwe.Ezinye iiphakheji zokutya zomelele kakhulu kwaye zineelebhile zokhuseleko, umphumo kukukhusela umdla weshishini ekulahlekeni.Iibhegi yokupakishainokuba ne-laser logo, umbala okhethekileyo, ukuqinisekiswa kweSMS kunye nezinye iilebhile.Ukongeza, abathengisi bazama ukunqanda ubusela ngokubeka iileyibhile zokujonga i-elektroniki kwiipakethi zokutya, ezinokuthi zisiwe kwindawo yokuphuma kwivenkile ye-demagnetization.
7. Iluncedo.Ukupakishwa kusenokuba neempawu eziququzelela ukongezwa, ukulayishwa, ukothula, ukupakisha, ukuboniswa, ukuthengisa, ukuvulwa, ukupakisha, usetyenziso nokusetyenziswa kwakhona.